ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးများအတွက် ဇွန်လတစ်လစာ ဟောစာတမ်း - Myannewsmedia
ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးများအတွက် ဇွန်လတစ်လစာ ဟောစာတမ်း
By SPACEPosted on June 9, 2019
စီးပွားရေး….ဥပဒေနဲ့ မလွတ်ကင်းတဲ့ စီးပွားသမားတွေ သတိထားပါ။ ဒီလမှာ ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးတွေ အဖမ်းအဆီးခံရတာ များပါလိမ့်မယ်။ လွတ်ကင်းသူတွေလည်း အခွန်ကိစ္စတွေကြောင့် စိတ်ရှုပ်ရလိမ့်မယ်။ခဏခဏအစိုးရက ဝင်စစ်တာကြောင့်လည်း စိတ်ရှုပ်ရဖို့ရှိပါတယ်။ အစိုးဝန်ထမ်းတွေတော့ ဝင်ငွေနည်းလိမ့်မယ်။ အပြောင်းအရွှေ့ကိစ္စတွေကြောင့် အလုပ်ရှုပ်လိမ့်မယ်။ ကိုယ်မပြောင်းချင်တဲ့ နေရာမှာ ပြောင်းရွှေ့လုပ်ကိုင်ရတတ်ပါတယ်။ အခြားစီးပွားရေးလုပ်သူတွေလည်း ထိုင်နေရလောက်အောင် ပါးလိမ့်မယ်။ယတြာခြေထားရင်တော့ သက်သာတာပေါ့ဗျာ။ယတြာ=နီးစပ်ရာ ဘုရားမှာ မိမိသက်စေ့ ရေသပ္ပာယ်ပြီး သောက်ရေသန့်လှူ ပေးပါ။
ငွေကြေး…လက်လွန်ထားတာတွေတော့ ဆုံးပြီသာမှတ်တော့။ မဟုတ်ရင်တော့ စိတ်သောက ရောက်နေရုံသာရှိမှာပါ။ ပြန်ရဖို့ ခက်ခဲပါတယ်။ ထွက်ငွေအင်မတန်များပြီး ဝင်ငွေနည်းလို့ အကြွေးတောင် တင်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီလမှာ လုံးဝ ငွေအဝင်နည်းမှာပါ။ယတြာတော့လုပ်သင့်ပါတယ်။ ယတြာ= မနက်တိုင်း အိမ်ဘုရားမှာမေတ္တာသုတ် ရွတ်ဖတ်ပေးပြီး မမြင်အပ်မမြင်ရာတွေကို မေတ္တာပို့ အမျှဝေပေးကြပါ။ ဒါက အကောင်းဆုံး ယတြာပါဘဲ။ နေ့တိုင်းလုပ်သင့်ပါတယ်။
ကျန်းမာရေး…. ဖျားတာနာတာ မကြာခဏဖြစ်မယ်။ အထူးသဖြင့် ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးတွေ ငှက်ဖျားဖြစ်နိုင်တဲ့ ဒေသတွေကို မသွားသင့်ပါဘူး။ ငှက်ဖျားရောဂါကို ခံစားရတတ်ပါတယ်။ ရောဂါပိုး ဝင်တတ်ပါတယ်။ရွှေတွင်းက လုပ်သားတွေ ပိုသတိထားကြပါ။ အခန့်မသင့်ရင် ငှက်ဖျားရောဂါပိုး ဦးနှောက်ထဲဝင်ပြီး အသက်ပါ ပါသွားနိုင်ပါတယ်။ ယတြာ=ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေမှာ စောင်တွေ၊တဘက်တွေ လှူ ပေးကြပါ။
အချစ်ရေး… အချစ်ရေးကတော့ ကံကောင်းနေကြမှာပါ။ ချစ်သူ ရည်းစားတွေက တဆင့်တက်ပြီး အိမ်ထောင်သည် ဘဝကို ရောက်ကြလိမ့်မယ်။ အိမ်ထောင်ပြု ဖြစ်ကြလိမ့်မယ်။ အဝေးက ချစ်သူတွေ ပြန်လာပြီး မမျှော်လင့်ဘဲပျော်ရွှင်ရမယ့် လပါဘဲ။ ယတြာမလိုပါဘူး။
ပညာရေး….ဆယ်တန်းဖြေဆို ထားတဲ့ ဗုဒ္ဓဟူး သားသမီးတွေအနေနဲ့ အောင်မြင်ကြမှာဖြစ်ပမယ့် ဂုဏ်ထူးမှာတော့ ရာနှုန်းနည်းလိမ့်မယ်။ အသစ်တက်မည့် ကလေးတွေလည်း ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်တက်ရမှာပါဘဲ။ ယတြာ=အိမ်ဘုရားမှာ သရက်သီးအမှည့်လှူ ပေးပါ။ခွဲစိတ်ပြီးတင်ရင် ပိုကောင်းပါတယ်။အလုံးအရေအတွက်ကတော့ မိမိတတ်နိုင်သလောက်ပေါ့။
လူမှုရေး…. ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးများ အဓိက မီးဘေးသတိထားပါ။ ဘေးအိမ်ကနေ ကိုယ့်အိမ်မှာ မီးဘေးကြုံတတ်ပါတယ်။ အခုလိုမဟောချင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သတိပေးတဲ့အနေနဲ့ ရေးတာပါ။အိမ်မှာ မီးချိတ် မီးကပ်ရှိပါစေ။ မိမိကိုယ်တိုင်လည်း အိမ်မှာမီးသုံးစွဲတာ သတိမပျက်ပါစေနဲ့။ယတြာ=အရင်ရက်တွေက မီးလောင်ခဲ့တဲ့ မီးဘေးသင့်သူတွေကို ကိုယ်တတ်နိုင်သလောက် အဝတ်နဲ့ငွေလှူ ပေးပါ။
အိမ်ထောင်ရေး…. ဖောက်ပြန်တဲ့ ကိစ္စတွေကြောင့် ကွဲကွာသွားနိုင် သည်အထိ ပြသနာတက်လိမ့်မယ်။ ကိုယ့်အိမ်ထောင်ဖက်ကို သတိထားပြီး ပိုပြုစုပါ။ ပိုပြီးကြင်နာပါ။ အဲဒါဆိုရင်တော့ အငယ်အနှောင်းကိစ္စပူစရာမလိုပါဘူး။ ယတြာလည်းခြေကြပေါ့ဗျာ။ ယတြာ=နီးစပ်ရာဘုရားမှာ ခေါင်းလောင်းလှူ ပေးပါ။မိမိတတ်နိုင်သလောက်ပေါ့ဗျာ။များများလှူ နိုင်လေကောင်းလေပါဘဲ။
စီးပှားရေး….ဥပဒနေဲ့ မလှတျကငျးတဲ့ စီးပှားသမားတှေ သတိထားပါ။ ဒီလမှာ ဗုဒ်ဓဟူးသားသမီးတှေ အဖမျးအဆီးခံရတာ မြားပါလိမျ့မယျ။ လှတျကငျးသူတှလေညျး အခှနျကိစ်စတှကွေောငျ့ စိတျရှုပျရလိမျ့မယျ။ခဏခဏအစိုးရက ဝငျစဈတာကွောငျ့လညျး စိတျရှုပျရဖို့ရှိပါတယျ။ အစိုးဝနျထမျးတှတေော့ ဝငျငှနေညျးလိမျ့မယျ။ အပွောငျးအရှကေိ့စ်စတှကွေောငျ့ အလုပျရှုပျလိမျ့မယျ။ ကိုယျမပွောငျးခငျြတဲ့ နရောမှာ ပွောငျးရှလေု့ပျကိုငျရတတျပါတယျ။ အခွားစီးပှားရေးလုပျသူတှလေညျး ထိုငျနရေလောကျအောငျ ပါးလိမျ့မယျ။ယတွာခွထေားရငျတော့ သကျသာတာပေါ့ဗြာ။ယတွာ=နီးစပျရာ ဘုရားမှာ မိမိသကျစေ့ ရသေပ်ပာယျပွီး သောကျရသေနျ့လှူ ပေးပါ။
ငှကွေေး…လကျလှနျထားတာတှတေော့ ဆုံးပွီသာမှတျတော့။ မဟုတျရငျတော့ စိတျသောက ရောကျနရေုံသာရှိမှာပါ။ ပွနျရဖို့ ခကျခဲပါတယျ။ ထှကျငှအေငျမတနျမြားပွီး ဝငျငှနေညျးလို့ အကွှေးတောငျ တငျပါလိမျ့မယျ။ ဒီလမှာ လုံးဝ ငှအေဝငျနညျးမှာပါ။ယတွာတော့လုပျသငျ့ပါတယျ။ ယတွာ= မနကျတိုငျး အိမျဘုရားမှာမတ်ေတာသုတျ ရှတျဖတျပေးပွီး မမွငျအပျမမွငျရာတှကေို မတ်ေတာပို့ အမြှဝပေေးကွပါ။ ဒါက အကောငျးဆုံး ယတွာပါဘဲ။ နတေို့ငျးလုပျသငျ့ပါတယျ။
ကနျြးမာရေး…. ဖြားတာနာတာ မကွာခဏဖွဈမယျ။ အထူးသဖွငျ့ ဗုဒ်ဓဟူးသားသမီးတှေ ငှကျဖြားဖွဈနိုငျတဲ့ ဒသေတှကေို မသှားသငျ့ပါဘူး။ ငှကျဖြားရောဂါကို ခံစားရတတျပါတယျ။ ရောဂါပိုး ဝငျတတျပါတယျ။ရှတှေငျးက လုပျသားတှေ ပိုသတိထားကွပါ။ အခနျ့မသငျ့ရငျ ငှကျဖြားရောဂါပိုး ဦးနှောကျထဲဝငျပွီး အသကျပါ ပါသှားနိုငျပါတယျ။ ယတွာ=ဘုနျးကွီးကြောငျးတှမှော စောငျတှေ၊တဘကျတှေ လှူ ပေးကွပါ။
အခဈြရေး… အခဈြရေးကတော့ ကံကောငျးနကွေမှာပါ။ ခဈြသူ ရညျးစားတှကေ တဆငျ့တကျပွီး အိမျထောငျသညျ ဘဝကို ရောကျကွလိမျ့မယျ။ အိမျထောငျပွု ဖွဈကွလိမျ့မယျ။ အဝေးက ခဈြသူတှေ ပွနျလာပွီး မမြှျောလငျ့ဘဲပြျောရှငျရမယျ့ လပါဘဲ။ ယတွာမလိုပါဘူး။
ပညာရေး….ဆယျတနျးဖွဆေို ထားတဲ့ ဗုဒ်ဓဟူး သားသမီးတှအေနနေဲ့ အောငျမွငျကွမှာဖွဈပမယျ့ ဂုဏျထူးမှာတော့ ရာနှုနျးနညျးလိမျ့မယျ။ အသဈတကျမညျ့ ကလေးတှလေညျး ပြျောပြျောရှငျရှငျတကျရမှာပါဘဲ။ ယတွာ=အိမျဘုရားမှာ သရကျသီးအမှညျ့လှူ ပေးပါ။ခှဲစိတျပွီးတငျရငျ ပိုကောငျးပါတယျ။အလုံးအရအေတှကျကတော့ မိမိတတျနိုငျသလောကျပေါ့။
လူမှုရေး…. ဗုဒ်ဓဟူးသားသမီးမြား အဓိက မီးဘေးသတိထားပါ။ ဘေးအိမျကနေ ကိုယျ့အိမျမှာ မီးဘေးကွုံတတျပါတယျ။ အခုလိုမဟောခငျြပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ သတိပေးတဲ့အနနေဲ့ ရေးတာပါ။အိမျမှာ မီးခြိတျ မီးကပျရှိပါစေ။ မိမိကိုယျတိုငျလညျး အိမျမှာမီးသုံးစှဲတာ သတိမပကျြပါစနေဲ့။ယတွာ=အရငျရကျတှကေ မီးလောငျခဲ့တဲ့ မီးဘေးသငျ့သူတှကေို ကိုယျတတျနိုငျသလောကျ အဝတျနဲ့ငှလှေူ ပေးပါ။
အိမျထောငျရေး…. ဖောကျပွနျတဲ့ ကိစ်စတှကွေောငျ့ ကှဲကှာသှားနိုငျ သညျအထိ ပွသနာတကျလိမျ့မယျ။ ကိုယျ့အိမျထောငျဖကျကို သတိထားပွီး ပိုပွုစုပါ။ ပိုပွီးကွငျနာပါ။ အဲဒါဆိုရငျတော့ အငယျအနှောငျးကိစ်စပူစရာမလိုပါဘူး။ ယတွာလညျးခွကွေပေါ့ဗြာ။ ယတွာ=နီးစပျရာဘုရားမှာ ခေါငျးလောငျးလှူ ပေးပါ။မိမိတတျနိုငျသလောကျပေါ့ဗြာ။မြားမြားလှူ နိုငျလကေောငျးလပေါဘဲ။
Previous post အရက်မူးရာကနေ အခန်းဖော်အား ပစ္စည်း ဖြတ်ပစ်ဖို့ ပိုက်ဆံပေးစေခိုင်းတဲ့အမျိုးသား
Next post ကြာသပတေးသားသမီးများအတွက် ဇွန်လတစ်လစာ ဟောစာတမ်း
” သူမရဲ့ TikTok Follower ၁သန်းပြည့်အောင် Follow လုပ်ပေးကြဖို့မေတ္တာရပ်ခံခဲ့တဲ့ နေခြည်ဦး”
” Covidကြောင့် မဖြေဖြစ်တဲ့ သူမရဲ့ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူနောက်ဆုံးနှစ်ကျောင်းသူဘဝကို အရွှန်းဖောက်ပြောပြလာတဲ့ သဇင်ထူးမြင့်”
ဘိုးဘိုးကြီး လွင်မိုးရဲ့ ပန်းချီကားတွေကို ယူဆော့ထားတာကြောင့် ဘိုးဘိုးကြီးဆူခံရမှာကြောက်ပြီး “ဘိုရုပ်မရဲ” ဆိုပြီး တတွင်တွင်ပြောနေတဲ့ Liam ရဲ့ ဗီဒီယို
“ခင်ပွန်းဖြစ်သူရဲ့ အလုပ်ရှိရာ ဘန်ကောက်မှာ နေထိုင်နေရသူ သူမအတွက် အခုချိန်လေးမှာ အမိမြေက အမေ့အိမ်လေးကို လွမ်းကြောင်းရင်ဖွင့်လာတဲ့ အိမ့်ချစ်”